အန္တရာယ်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် AIPA အကြံပေးကောင်စီ၏ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ | NPE
အန္တရာယ်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် AIPA အကြံပေး ကောင်စီ၏ တတိယအကြိမ် အစည်း အဝေး (3rd AIPACODD Meeting)ကို ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ အာဆီယံ ပါလီမန်များညီလာခံ (AIPA) ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါဝင်တက်ရောက် သည်။
အစည်းအဝေး၌ ဗီယက်နမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် 1st Vice-President - Mdm. Tong Thi Phong နှင့် AIPA အထွေထွေအတွင်းရေး မှူးချုပ် Ms. Nguyen Tuong Van တို့က အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံး (UNODC) မှ ကိုယ်စားလှယ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ဆိုင်ရာ အာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိ ကြီးများအဖွဲ့ (ASOD)၏ ကိုယ်စား လှယ်တို့က ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ် ရောဂါ ကာလအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ကာကွယ်တားဆီးခြင်း အခြေအနေ များနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုနှင့် သုံးစွဲမှု တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြ ကြပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အလုပ်သမား၊ မသန်စွမ်းသူများ (War Invalids)နှင့် လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု ကုသခြင်းနှင့် ကာကွယ်တားဆီးခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့ အကြုံများကို မျှဝေခဲ့သည်။
ယင်းနောက် AIPA အဖွဲ့ဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ က နိုင်ငံအလိုက် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ၊ အတွေ့အကြုံများကို အပြန်အလှန် မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းအစည်းအဝေး၌ “Turning Words into Actions towardsaDrug-free ASEAN Community” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုမူကြမ်းကို ဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ အဆို မူကြမ်းတွင် “ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်တွင် ဒေသ တွင်း၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြဿနာများကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် စွမ်းရည် မြှင့်တင် ခြင်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များပေးခြင်း၊ အစီအမံ များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝေမျှ ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု၊ ဒေသတွင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုတို့ကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်” တိုက်တွန်းထားသည်။ ထို့နောက် ဗီယက်နမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မှ Mdm. Nguyen Thuy Anh က နိဂုံး ချုပ် အမှာစကား ပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးသို့ AIPA ပူးပေါင်း ကော်မတီဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရွှေရွှေစိန်လတ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်ထူး အောင်နှင့် လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါက်တာပြည့်စုံဝင်းတို့ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။